Global Voices teny Malagasy » Tafatafa Niarahana Tamin’ilay Tompon-dakan’ny Ady Totohondry Tao Ginea Lasa Belza Mpanao Politika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Oktobra 2013 3:23 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika (en) i Jane Ellis, miora
Sokajy: Afrika Mainty, Eoropa Andrefana, Belzika, Ginea, Liberia, Fampandrosoana, Fanatanjahantena, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà, Tanora, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Lasa Belza mpanao politika ihany koa ilay tompondaka in'enina teo amin'ny ady totohondry iraisan'ny kaontinanta (Federasion'ny ady toto hondry iraisam-pirenena ) sokajin-danja antonony i Lansana Bea Diallo, fantatra kokoa amin'ny anarana Bea Diallo  [fr], teraka tao Liberia ary teratany Gineana.
Bea Diallo, Ady Farany amin'ny naha-mpanao ady totohondry azy. Sary nalaina tao amin'ny pejy Facebook-ny (nahazoana alàlana)
Lany tao amin'ny parlemantam-paritr'i Brioksela (Bruxelles)  sy tao amin'ny parlemantan'ny vondrom-piarahamonina Frantsay i Bea Diallo, mpanolotsain'ny tanàna momba ny Tanora, ny Asa, ny Fianakaviana, sy ireo fifandraisan'ny andian-taranaka ary ny Fitoviam-bintana ao Ixelles , iray amin'ireo kaominina sivy ambinifolon'ny faritry ny Renivohitr'i Brioksela .
Nametraka fanontaniana vitsivitsy taminy ny Global Voices.
Global Voices (GV): Tompon-dakan'ny ady totohondry no nahalalanay anao, nefa lasa olom-boafidim-pirenena ao Belzika ihany koa ianao? Làlana re izany !
Bea Diallo (BD): Eny, nahafantatra ahy amin'ny maha-mpanao ady toto hondry ahy ireo Gineana, fa indrindra koa amin'ny mahalehilahy niezaka ny hivarotra ny endrik'i Ginea ary ankehitriny, tsy vitan'ny hoe fotsiny solombavam-bahoaka ao amin'ny parlemanta Belza efa ho folo taona aho izao, fa koa voafidy ho solombavam-bahoaka eto an-toerana efa ho 7 taona izao. Lasa lehilahy feno traikefa aho ary neken'ny tontolo politika, izay tsy tongatonga ho azy.
GV: Matetika dia sarotra ny manambatra ny fanatanjahantena avo lenta amin'ny fianarana, nefa ianao nahazo diploma lisansa amin'ny sehatry ny Toekarena.
BD: Eny, matetika ny fanatanjahantena avo lenta dia tsy miaraka amin'ny fianarana any amin'ny anjerimanontolo,nefa , araka ilay lazaiko matetika, maro ireo zavatra vitanao rehefa eo ny finiavana ary ny nofinofiko dia ny hahomby amin'izy roa mba hanompoako ny firenena niaviako indray andro any. Ho fanampiana an'i Ginea ho lasa firenena mahaleotena tanteraka ary indrindra ny mba hanomezana tombontsoa ny vahoaka manoloana io harena io.
GV: Ahoana ny fomba nidiranao nanao politika?
BD: Tena kisendrasenda no nahatongavako tamin'izany, tsy nikasa ny hiasa anatin'ny politika mihitsy aho, nefa amin'ny mahalehilahy mpiady ahy, nanolo-tena ho an'ny hetsika maro aho, ary indray andro dia nisy nanasa ahy hanohana antoko iray eo amin'ny toeran'ny mpifaninan'ny fisokafana na dia tsy nitàna toerana mety ho voafidy akory aza aho satria dia laharana 69 tao anatin'ilay lisitra. Fahadimy tamin'ireo dimy amby roapolo voafidy aho.
GV: Nifaninana tanatinà ady totohondry tany Ginea ianao, inona ny fahatsiarovana voatahirinao tamin'izany?
BD: Mieritrerira aho fa io no fotoana tsara indrindra teo amin'ny asa ara-panatanjahantena nataoko. Fotoana tsy hoadinoiko ireny, ny fanaovana ady totohondry manoloana olona 60.000 sy maherin'ny 300.000 tany amin'ireo arabe. Fotoana nahagaga tsotra izao izany.
GV: Niezaka ny nanampy ireo mponin'i Conakry [renivohitr'i Ginea] ianao, indrindra to amin'ny sehatra fitateram-bahoaka. Inona ireo lesona azonao avy amin'izany, ary tamin'ny fomba ahoana?
BD: Hitanao, tsy manana nenina aho, noheveriko fa ilaina ny nanao izany tamin'izany fotoana; raha very volabe aho noho ny haratsiam-panahin'ireo mpanao politika aty amintsika izay teo anilan'izay, nanohy namono ny vahoaka noho ny filomanosan'izy ireo tanaty harena nefa tsy misy tetikasa mivaingana ho an'ny Gineana.
GV: Manana fikasana hafa ho an’i Ginea, firenena niavianao, ve ianao?
Bea Diallo rehefa manao politika. Sary nalaina avy ao amin'ny pejy Facebooki-ny , nalain'i Francine Verstraeten 
BD: Ny fikasàna hany ananako ho an'i Ginea dia tsy miova – ny hanampy ity firenena mahafinaritra ity hanafaka ny tenany amin'ny fatotra nataon'ireo tsy iza fa ny rahalahintsika Gineana ihany: ireo mpanao politika, ny maro an'isa hatramin'ny mpanohitra.
GV: Facebook, twitter ary bilaogy! Azonay tsoahana avy amin'io ve fa tahaka an'i Barack Obama sy ny media sosialy i Bea Diallo, izay mampiasa azy matetika, sa tsindraindray ihany?
BD: Indrisy, tsy dia mampiasa azy ireo loatra aho, mbola mila manatsara ary indrindra mikaroka fomba raitra kokoa entiko mampiasa ireo tambajotra ireo aho, izay tena hery lehibe eo amin'ny fifandraisana.
GV: Mihamaro ireo tanora Afrikana miezaka ny handeha any Eoropa, na eo aza ireo sedra goavana hatrehan'izy ireo. Inona ny torohevitra omenao azy ireo?
BD: Sarotra ny manome torohevitra ho an'ireo vahoaka tanora izay miezaka ny hampivoatra ny fepetra fivelomany, sy an'ireo fianakaviany mikasika ireo sedra rehetra mety hatrehany. Ary koa, tsy misy politika enti-mandrisika ireo tanora ireo hijanona any amin'ny firenena niaviany na ny kaontinanta misy azy.
Nefa, ankehitriny any Eoropa dia sarotra ny mitady asa sy ny manatsara ny toerana misy anao rehefa avy any Afrika ianao, noho izany dia any amin'ny kaontinanta [Afrikana] no mila mitohy ny ady miaraka aminà taranaka vaovao maka fahefana mba hanomezany izany ny vahoaka.
GV: Manana teny enti-mamarana izany ve ianao?
BD: Ny entiko hamaranana izany dia ny nofinofiko! Tiako mba ho tonga aty Eoropa ireo Afrikana, tahaka ny fandehanan'ny Eoropeana any Afrika, raha lazaina amin'ny fomba hafa dia hoe, ho fialan-tsasatra ary avy eo miverina mody satria manana asa sy fianakaviana miandry azy izy ireo.
GV: Misaotra anao namaly ireo fanontanianay ary mirary fahombiazana amin'ireo tetikasanao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/12/52726/
 Federasion'ny ady toto hondry iraisam-pirenena ) : http://en.wikipedia.org/wiki/International_Boxing_Federation
 Bea Diallo: http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9a_Diallo
 nalaina tao amin'ny pejy Facebook-ny (nahazoana alàlana)
 Lany tao amin'ny parlemantam-paritr'i Brioksela (Bruxelles): http://www.ps.be/Pagetype1/PS/Vos-Elus/Bea-DIALLO.aspx
 mpanolotsain'ny tanàna momba : http://www.ccre.org/en/membres/Belgique.htm
 faritry ny Renivohitr'i Brioksela: http://en.wikipedia.org/wiki/Brussels-Capital_Region
 pejy Facebooki-ny: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151578902794600&set=t.1040535038&type=3&theater